Ngwa 5 kacha mma ime enyi maka gam akporo | Androidsis
Aaron Rivas | 22/11/2021 08:00 | Ngwa gam akporo, Mobiles
N'ụwa ebe ịntanetị bụ otu n'ime ụzọ isi ekwurịta okwu, ma n'ebe ọrụ ma n'ihe gbasara ọbụbụenyi na ndị ọzọ, ọ dị mkpa inwe mmekọrịta chiri anya nke na-agafe ebe dị anya, maka nke a, e nwere netwọk mmekọrịta na ikpo okwu ndị ọzọ. nke na-emezu ọrụ nke idobe ndị mmadụ na kọntaktị. E nwekwara ọtụtụ ngwa maka nke a, n'ime ha bụ ndị a na-eji eme enyi, bụ ndị anyị na-ekwu maka ya n'okpuru.
Oge a anyị na-ewetara gị ndepụta nke anyị na-anakọta ngwa 5 kacha mma ime enyi maka gam akporo. Ha niile bụ n'efu, n'otu oge ahụ, ha dị na Ụlọ Ahịa Google Play. Nke ọ bụla bụ ihe pụrụ iche ma nwee atụmatụ na ọrụ ndị na-enyere aka guzobe mmekọrịta enyi na enyi, n'agbanyeghị na enwere ike iji ya mee ihe ndị ọzọ yiri ya.
1 MeetMe: Nkata na ndị enyi ọhụrụ
2 Nkata, kpaliri, vidiyo na onye ọ bụla: Paltalk
3 SKOUT: zute, kparịta ụka, mee enyi
4 Waplog: mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, Nkata & ịchọta
MeetMe: Nkata na ndị enyi ọhụrụ
Iji bido nke ọma, anyị nwere MeetMe, otu n'ime ngwa ndị a na-ejikarị eme enyi ọhụrụ na ịgwa ọtụtụ mmadụ okwu n'oge niile. Ma ọ bụ naanị na Google Play Store ọ nwere ihe karịrị nde 50 nbudata, ya mere ọ bụ otu n'ime ihe ndị a na-ejikarị na udi ya, ya mere ọ gaghị efu na ndepụta a.
Ngwa a chọrọ ijikọ ndị nwere mmasị na mmasị yiri nke ahụ, n'ebumnobi nke ime ka ha nwee ọtụtụ ihe jikọrọ ya na, n'ụzọ dị otú a, na-amalite inwe mkparịta ụka na-atọ ụtọ ma na-adọrọ mmasị, dabere na ihe omume ntụrụndụ ha, ihe omume ntụrụndụ na ihe niile na-amasị ha abụọ.
Ọ na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ na netwọk mmekọrịta. N'ezie, ọ nwere ụfọdụ isi ọrụ nke Facebook, nke na-enye gị ohere ịmepụta akwụkwọ banyere ihe ị chọrọ na ịza ajụjụ na ha, nakwa dị ka na-egosi ma ọ bụrụ na-amasị gị ma ọ bụ na-dị iche iche bọtịnụ, niile site na mgbidi na-emezu ihe ndị ahụ. ọrụ nke nri ahaziri ahazi.
O nwekwara ngalaba profaịlụ ebe ị nwere ike mata ndị ọzọ ma mee ka a mara gị nkenke na foto nke na-achọpụta gị yana ozi ọ bụla ọzọ ịchọrọ ịkọrọ ndị ọrụ. Zipu onyonyo na foto site na nkata wee chọpụta onye nọ nso na enwere ikwu okwu; jiri nzacha zute ndị masịrị gị wee mee enyi dị ka ọ dịtụbeghị mbụ ngwa ngwa.
MeetMe: Nkata & Kpoo Ndị Ọhụrụ
Nkata, kpaliri, vidiyo na onye ọ bụla: Paltalk
Ọ bụrụ na ịchọrọ izute ndị mmadụ n'ụzọ na-atọ ụtọ na nke siri ike, gbalịa Paltalk. N'ebe a, na mgbakwunye na inwe mkparịta ụka ebe ị nwere ike ịkparịta ụka na ndị enyi ọhụrụ, ị nwekwara ike ịme oku vidiyo otu na ndị dị iche iche si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Ị nwekwara ike ime karaoke dị ndụ ma ọ bụ, nke ọma, sonye na arụmụka ndọrọ ndọrọ ọchịchị, gbasara sayensị ma ọ bụ isiokwu ọ bụla ọzọ nwere mmasị. Na mgbakwunye, ị nwere ike igwu egwu trivia na otu, ihe na-enyere aka ịgbaji ice ma na-enye gị ohere imeta ndị enyi n'ụzọ dị mfe.
Paltalk nwere ebe a na-akparịta ụka n'ihu ọha nke ị nwere ike ịbanye n'efu ma nye gị ohere ikwupụta echiche gị wee kwupụta onwe gị n'isiokwu ndị ha na-akpakọrịta, nke nwere ike ịdị iche iche. Enwere ihe dị ka ụlọ mkparịta ụka ọha na eze 5,000 nwere ụdị mkparịta ụka na mgbanwe dị iche iche, ha niile na ndị ezigbo mmadụ na-eche echiche ma na-ekwu okwu n'efu, n'ezie.
Ị nwekwara ngalaba profaịlụ ebe ị nwere ike hazie nke gị ka ị mara ngwa ngwa gbasara ihe na-amasị gị ma hụ nke ndị ọzọ. Na mgbakwunye, ị nwere ike ịmekọrịta na onyinye mebere nke ị nwere ike izipu ma nweta n'aka ndị ọzọ.
Paltalk: Gị na ndị ọbịa kparịta ụka
SKOUT: zute, kparịta ụka, mee enyi
Ụzọ ọzọ dị mma iji zute ndị mmadụ na ime enyi ọhụrụ bụ ngwa dị ka SKOUT, nke nwere ọrụ niile dị mkpa na nke dị mkpa iji zụlite njikọ ọhụrụ na njikọ dị n'etiti ndị chọrọ ịgbasa mmekọrịta ha na ndị nọ n'akụkụ ndị ọzọ nke ụwa na, n'ezie, na ndị nọ nso ebe ha bi.
SKOUT nwere nkata ọchị ebe ị nwere ike izipu akwụkwọ mmado, foto, onyonyo na ndị ọzọ, ihe niile na-eme ka mkparịta ụka na-adọrọ mmasị, mmetụta uche, mmetụta na ntụrụndụ. Gbanwee ekele, zute ma gbalịa ka mmadụ kpawa; na SKOUT ọ dị mfe.
Ọtụtụ nde ndị ọrụ na-eji ngwa a eme enyi ọhụrụ, yabụ na ọ dị mma maka ịchọta ndị enyi ọhụrụ na ịhazi ihe ọchị na ndị si obodo dị iche iche, obodo na ọbụna mba.
OZI - Zute, Kpaa nkata, gaa na Live
Waplog: mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, Nkata & ịchọta
Ịga n'ihu na ngwa nke anọ na ndepụta a nke ngwa kachasị mma iji mee enyi maka gam akporo, anyị nwere Mkpo, ngwa nke, na mgbakwunye na imezu ebumnuche nke post a, na-ejekwa ozi iji nweta ụbọchị, ya mere enwere ike iji ya mee enyi ma ọ bụ ịchọta ndị mmekọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị lụbeghị di ma ọ bụ nwunye, ọ ga-enyere gị aka ịchọta ịhụnanya nke ndụ gị; ị maghị ebe o nwere ike isi bịa.
Developer: Waplog mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ngwa
Iji mechaa, anyị nwere Ablo, ngwa nke na-nkewa dị ka otu n'ime ndị kasị mma maka gam akporo mgbe ọ na-abịa ime enyi ọhụrụ.
Ablo na-enye gị ohere ijikọ na ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa ma na-asụ asụsụ nke gị site na nkata ya. Ọ nwekwara ọrụ na-adọrọ mmasị nke na-enye ohere mmekọrịta n'etiti ndị ọrụ, nke na-eme ka ụzọ ha nwee ike ịmepụta njikọ mmetụta na enyi na obere oge. O nwekwara oku vidiyo na ihe ndị ọzọ.
Ablo - Ọ dị mma izute gị!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Ngwa 5 kacha mma ime enyi maka gam akporo